Beerku ma kaa buuxiyo? Baro khuraafaadka iyo xaqiiqda | Ragga Stylish
Cabsida markaan cabeyno biirka hodanka ah weligood maskaxdeenna ayey ka gudubtay oo ah in ay na cayilayso. Waana khuraafaadka ku saabsan haddii biir naaxinta ama kuma wareegayaan dhammaan shabakadaha bulshada tan iyo markii la abuuray. Sidaad filan karto, waxaa jira meel dhexe oo wax walba oo ka durugsan labada dhinac ee si buuxda u wanaagsan iyo dhinacyada gebi ahaanba taban. Beerku wuxuu leeyahay kalooriye qaadasho aan ku arki doonno qodobkan, laakiin laf ahaanteedu kuma daalinayso cayil.
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno dhinacyo muhiim ah oo ku saabsan in biirku naaxinayo iyo in kale iyo waxa doorsoomayaasha ay naga dhigayaan inaan sii xumeyno tayada isticmaalkeeda.
1 Kaloriintu way socdaan oo kalooriyadu way yimaadaan
2 Biirku ma wuxuu kaa dhigaa mid dufan badan?
3 Saamaynta wanaagsan ee biirka jidhka
Kaloriintu way socdaan oo kalooriyadu way yimaadaan
Jidhkeenu waa isku dheelitirnaan joogto ah oo udhaxeysa kalooriyada aan cunno iyo kalooriyada aan gubno. Jidhkeena, waayo nolosha oo keliya ayaa gubta kalooriyada. Kalooriyada loo isticmaalo shaqooyinka sida dheef-shiidka, gaadiidka dhiigga, kicinta dareenka, dhaqdhaqaaqa indhaha, dheef-shiid kiimikaadka, koritaanka timaha, ciddiyaha, iwm. Waxaan ugu yeernaa dejinta shuruudahaan tamarta aasaasiga ah.
Dheef-shiid kiimikaadka asalka ahi aad ayuu u kala duwan yahay waxayna kuxirantahay doorsoomayaasha qaarkood sida da'da qofka, dhererkooda, hiddo-wadaha iyo saadaalinta jirka inuu waxbadan sameeyo ama ka yar. Kaloriyeyaashan lagu cuno dheef-shiid kiimikaadka asalka ah waa inaan ku darno kuwa aan cunno inta aan ku jirno hawl maalmeedkeena. Socodka, fadhiista kumbuyuutarka hortiisa, dhaqaaqida, karinta, nadiifinta, maydhashada, cayaaraha isboortiga, orodka, iwm. Isku soo wada duuboo waxqabadyada maalintii oo dhan waxaan siinaa dheef-shiid kiimikaadka aasaasiga ah waxaanan heli doonaa wadarta kharashka tamartayada.
Wadarta kharashka tamarta ama sidoo kale loo yaqaan kalooriyeyaasha dayactirka ayaa ah kuwa ina tusaya kalooriyada uu jidhku u baahan yahay si uu u ilaaliyo culeyska una awoodo inuu si sax ah ugu jimicsado dhammaan shaqooyinka dheef-shiid kiimikaadka. Hagaag, Haddii aan isticmaalno kalooriyo ka badan inta dayactirka waxaan yeelanaynaa miisaan, haddii aan cunno wax kayarna, miisaankeennu waa yaraanaynaa.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waxa dhammaan noocyadan kalooriyadu ka yimaadeen. Runtii tani waa dulucda maqaalka. Halkii aad ka fikiri lahayd in biirku kaa dhigo mid buuran iyo in kale, waa inaad ka fekertaa in isticmaalka biirku uu kor u qaadayo kalooriyada aad cunayso maalin kasta oo ka sarreysa wadarta kharashka tamartaada iyo in kale. Qofku wuu cabi karaa biir wuuna dhimi karaa culeysna kuwa kalena way cabi karaan wuuna kordhin karaa miisaan. Dhammaan waxay kuxirantahay wadarta kalooriyada maalin kasta waxayna sii jirtaa waqti kadib.
Biirku ma wuxuu kaa dhigaa mid dufan badan?
Waxaa intaa dheer, waxaad u maleyneysaa marar badan in cabitaanka biirka ee cuntooyinka ay kaa dhigeyso inaad culeys dheeraad ah yeelato adoo sii dheeraanaya dheef-shiidka. Ma jiraan wax cunto ah ama cabitaan ah oo keligaa kaa dhigaya qof buuran ama lumiya miisaanka adduunkan. Waa isku-xidhka iyaga iyo ururka aad haysato ayaa kaa dhigaya cayil iyo in kale. Haddii aad haysato maalin aad ka badatay kalooriyeyaasha, waxba ma dhacaan. U oggolow naftaada whims waqti ka waqti.
Waxaan culeys ka qaadeynaa ama kordhinayaa dufanka jirkeena markii kalooriga dheeraadka ah la ilaaliyo waqti ka dib. Waa wax caadi ah in lagu guuldareysto dhamaadka usbuuc dhamaadka cuntada qoyska, Laakiin haddii aad daryeesho naftaada 80% waqtigaaga, waad awoodi kartaa marinkaas si aad ugu raaxaysato naftaada.
Noloshu waa in lagu raaxeystaa oo biir aad u qabow oo dhalaalaya ayaa hubaal ah in la doonayo. Waxaa si aad ah loo rumaysan yahay in biirku uu naaxinayo maxaa yeelay waxaa ku samaysma halsano khamiir laga sameeyo qasabka, oo lagu sameeyo maljac shaciir ah laguna dhasho hilib digaag.
In kasta oo biirku yahay cabitaan khamri iyo khamriga looma tixgeliyo nafaqo Waa cabitaan, in yar, oo caafimaad qaba. Miisaan korodhka qofku kuma xirna isticmaalkiisa biirka, ilaa uu yahay qof khamri cabba, laakiin waa wadarta kalooriyada cuntada ku jirta.
Dhaqan caan ku ah dadka wax ku cuna qadada banaanka guriga waa qasabada. Bakoorad leh salad sare oo Ruush ah, mid kale oo anchovies la shiilay, ukumo la dubay ama xoogaa chorizo ​​iyo rooti cad. Kuwani waa tusaalooyinka tapas oo si fiican ugu dhex milma biir aad u qabow. Sideed u aragtaa isku-darkaas? Miyaad u maleyneysaa inay tahay biirka kaa dhigaya mid buuran ama waa dufan ka soo baxa chorizo, cuntooyinka shiilan iyo majones?
Saamaynta wanaagsan ee biirka jidhka
Kaliya maahan cabitaan bulsho ahaan la aqbalo laguguna taliyo haddii isticmaalkeedu yahay mid dhexdhexaad ah oo mas'uul ah, laakiin sidoo kale wuxuu faa'iidooyin ku siiyaa jirkeena. Waxaa jira cabsi aad u xun oo salka ku haysa khuraafaad ku faafay sannadihii la soo dhaafay oo waxaas oo dhan ay qabataa ay tahay in lagu beero fikrado xun. Beerku waa sida shey kasta oo kale oo ka kooban kalooriyo haddii wadarta kalooriyada cuntada ku jirta oo lagu daro biirka uu ka bato wadarta qarashka tamartaada, culeys ayaa kugu kordhayaa waqtiga.
Waa in la sheegaa taas aalkolada lafteeda looma tixgeliyo nafaqo waxayna leedahay 7 kcal halkii garaam. Si kastaba ha noqotee, biirku ma aha aalkolo keliya. Waxaa intaa dheer, kaliya 4,8% celcelis ahaan dhammaan beers waa aalkolo. Biirka dabiiciga ahi malaha kalooriyaal aad u tiro badan, ma laha dufanka buuxa ama sonkorta. Taas bedelkeeda, waxay leedahay xaddi badan oo kaarbohaydraytyo ah, fiitamiino iyo borotiinno.
Bakooraddu badanaa waxay leedahay qiyaastii 90 kalori. Si aad fikrad u hesho, 100 ml kasta oo biir ah waxay leeyihiin 43 kaloori. Waa cabitaan aad uga fudud marka loo barbardhigo cabitaannada kale ee fudud sida Coca Cola ama Fanta. Khamriga yar ee biirku leeyahay, kalooriyada yar ee ay siin doonto. Daasadaha aan khamriga lahayn waxay leeyihiin oo keliya 50 kalori, halka midka khamriga leh uu leeyahay 150 kcal.
Haddii qofku u baahan yahay inuu cuno qiyaastii 2000 kcal maalintii si uu u ilaaliyo culeyskiisa, sida aad u aragto, biirka ma ahan wax kalori badan oo la tixgeliyo. Iyaga waa inay lahaadaan isticmaal mas'uul ah oo kaa dhigaya inaad ka faa'iideysato biirka adigoon waxyeello u geysan caafimaadkaaga ama aan lagu darin kalooriyo dheeraad ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkaan aad sifiican ugu cadeyn kartid been abuurka beerka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Biirku miyuu kaa dhigaa mid buuran?